Ukujonga kwi-gvSIG 1.10 -Geofumadas
Jonga kwi-gvSIG 1.10
Ngo-Okthobha, 2010 Geospatial - GIS, GvSIG, Ukuprinta kokuqala
Emva kweentsuku ezimbalwa zokuba ehamba nge gvSIG 1.9, ukunyamezela kwam bugs yaloo nguqulo kunye ezinye iingoziNamhlanje ndibuyela kumcimbi we-gvSIG. Ukungayichukumisi le software ixesha elide kuye kwaba nemveliso kum, njengokuvula le nguqulo intsha kwaye ndiyithelekise nefoto ebendinayo kuloo msitho inomdla kakhulu.
Ubomi bombongi wetekhnoloji akukho lula.Ukuphononongwa kwesoftware ngaphandle kwesibophelelo, imfuneko okanye ukuthanda kunomdla. Sebenzisa isigqebelo nesoftware yokuxhasa exhasa i-header yamkelekile, kodwa ukuqonda ukukhuthaza inyathelo lomthombo ovulekileyo kundibize kakhulu. Kwakhona ukuba semva kwebhodibhodi kunokusonakalisa ngenkululeko kubugcisa bokubuza ngetoni yomzuzu, ukusuka kwisikrelemnqa sobugcisa ukuya kufana kwezimvo ezintathu amaJuda amabini ahlala enazo xa bephikisana ngendlela eqhelekileyo.
Ndimele ndivume ngokunyanisekileyo ukuba inkqubela phambili endiyibonayo ngale nguqulo indishiyile ndonelisekile. Ukuyisebenzisa kuhlobo 1.6 lwenjini yeJava, ehambelana neVista / Windows 7 kunye neprojekthi efanayo nexesha lokugqibela… inkqubela phambili iyabonakala. Ukuqala, unxibelelwano lubonakala ngathi lukhawuleza, lucocekile; Umsebenzi omkhulu ekusebenzeni nokuba yiJava kwaye andisahambi kwiLinux okwangoku. Ngokuqinisekileyo ngasemva kwale mizuzu ili-15 yokuncoma kwam kukho amawaka eeyure aguqulwe aba yikhowudi, hayi ukusuka kubadwelisi benkqubo indawo yobusanaKodwa wonke luluntu eye kubhejwa uvavanyo, ukuphendula izintlu, ukukhuthaza nkomfa yaye ekugqibeleni ukuthatha eli sixhobo yenye yeendlela ezininzi oluzinzileyo ngendlela ndikhe ndabona abantu.
Ekupheleni kwesi sahluko, nge-gvSIG into sonke esinethemba layo sisixhobo esinokuzinza ngokuhamba kwexesha, imveliso yamanyathelo ethu ngonobumba ñ, esinokuyinika nawuphi na umasipala ngesiqinisekiso sokuba ayizukufa xa imali iphela. ngoku uye wayomeleza. Ngokukodwa kwidabi lokulwa elinokulenza ESRI, I-AutoDesk, i-Intergraph ne-Bentley xa kukho ukhuphiswano olubonakalayo (ukuba kusele kuninzi) okanye nangenxa yolu hlobo olwenziwe ekuqaleni ekuqaleni (kunye nantoni enokuguqula) ngokuqwalasela isofthiwe ekhululekile ekuncintiswaneni kwaye ingaqiniseki ekuzinzeni kwayo.
Kodwa ke, ngesiqingatha seenyawo eHolland, andinalo ixesha elininzi eliseleyo lokuba ndithandane kwaye ukuthanda kwam akusayi kuhlala kuvelisa. Masibone ukuba yintoni ebambe umdla wam kwimigca yokuqala.
Ngokuchasene namaxesha angaphambili, kwinkqubo kuye kwafuneka ndikhethe kuphela umatshini we-Java kunye nolwimi, olunokuthi lube ngoluhlobo. Eminye, linyathelo eliqhubekayo.
«C: Iifayile zeNkqubo gvSIG_1.10_RC1zingvSIG.exe»
Andiboni ukungangqinelani neenguqulelo zangaphambili. Kodwa emva kokubona oku, ndazi nokuba yi-RC, andifumani sizathu sokugcina iinguqulelo ezindala.
Kwakhona enye icon kwideskithophu kunye nesimboli se-gvSIG siya kudibanisa kuphela.
Ngenxa yoko, kufuneka uye kwifolda yeefayile zenkqubo kwaye ukhiphe apho. Kuhlala kukho ifolda enegama Uninstaller equlathe indlela yesiqhelo yokususa ufakelo. Ndicebisa ukuyenza ukusuka apha, kuba iphaneli yokulawula isenokungabi yeyona ndlela ikhawulezayo okanye ayinakho ukubonisa zonke iinguqulelo ezifakiweyo ukuba besikhohlakele kwirejista.
Andinaxesha elininzi ngoku lokwenza uphononongo olunzulu. Kodwa ungazibona izinto ezintsha zenguqulo kwifayile ye- kukhulula indawo; ngoku ngoku ndiya kugxila kwiintlahlela ezintathu ezithandayo.
Imephu yendawo. Oku kuye kwahamba phambili kakhulu, kubandakanyeka kunye neendlela ezahlukeneyo zokubonwa kwaye ngaphantsi bugs. Ndide ndiyibone yomelele ngakumbi kunendlela uDig kunye neQGs abenza ngayo kangangeentsuku okanye ebenayo.
Kuyenzeka ukuba unxibelelane nayo ngokusondeza ngaphakathi ngeqhosha lasekhohlo le mouse. Yintoni ekhethiweyo ebhokisini iya kubonakala kwiscreen. Ke ngeqhosha lasekunene, ungatsala ibhokisi, ugcine ubungakanani, kwaye ukuba ucofa kuyo iya kubeka ifestile yobukhulu obufanayo kanye apho.
Ngevili leqhosha lixhasa ukucwangcisa, nangona andizange ndifumane indlela yokubuyela kuyo ubukhulu yoqobo. Ngokuqinisekileyo kufuneka kubekho into kwincwadana yemigaqo, eyisiqalo.
Uqwalaselo lobeko kule mephu yendawo lwenziwe "Jonga> lungiselela indawo yokubeka".
Ulwazi olukhawulezayo Olu luhlobo lomhlobo isixhobo sengcebiso yokutayipha, ebonisa imihlaba ekhethiweyo, xa ubeka isalathiso kumaleko. Ikuvumela ukuba ukhethe umaleko, kunye namabala, kubandakanya idatha ebaliweyo (ayigcinwanga) enjengommandla, umjikelezo kunye nobude.
Andiboni indlela yokutshintsha loo nto pink kodwa ngokuqinisekileyo unako, kwaye kubonakala ngathi kuyacotha ekuqaleni ukuba ukhetha imihlaba eliqela. Andinazo izakhiwo ezinalo mbala kodwa andikuthandi ukukhathazwa nguChiapanecos 🙂 kwaye, kusenokwenzeka ukuba I-AcerAspireOne Akuyena umatshini wokukhawuleza ukwenza i-GIS.
Itafile yokuHlola. Eyona nto inomdla endakha ndayibona. Wayeqhelene nesiqingatha bugs ukuba bayakhankanya kuluhlu losasazo, kodwa ukuyibona kundishiyile ndonelisekile. Inomsebenzi ofanayo nalowo usetyenziswa yiJografi kunye Fumana, iphakamisa itafile yeempawu zento, ngamaqhosha okuya kokulandelayo kunye nokukhetha ukuze ukusondeza okanye ukukhetha into kube namandla. Apha imephu yendawo iba nomtsalane.
Thatha unonophelo olukhulu ngamaqhosha asezantsi, njengoko unokucima iirekhodi, ukope idatha ukusuka kwinto enye ukuya kwenye kwaye ugcine. Kuya kufuneka ukuba ubone ukuba le festile ayinakuba nobude obulinganiselweyo, kuba yinkcitha yendawo xa kunedatha encinci; Khange ndizame kodwa ukuba ubunokungaphezulu kokulingeneyo ndicinga ukuba ibha ye umqulu. Ndikhethe umasipala ukuze ndivavanye kwaye ndilayishe, emva koko ifestile yayixhonywe ngesiqingatha null.point.error.
Emva koko siza kuzama ezinye iimpendulo ezile ncwadi.
Ngamafutshane, kubonakala ngathi yinguqulelo eyomeleleyo, kunye neenguqu ezininzi ekucelwa uluntu ukuba zenze. Ndikwabona ukuba kuninzi kuvavanyo, izibini zeebugs endizibonileyo besele ndizivile kuluhlu lokusasaza kwaye ngokuqinisekileyo zibangelwa kukunyamezela kwam okuncinci kweenkqubo ezisebenza ngasemva.
Kukho imingeni enamandla nale nto
rsion, ubukhulu becala ngokulungileyo. Sele iintsuku kwi Kwilizwekazi laseMerika Kubonakala ngathi zivakala zomelele, kodwa kuya kufuneka sibeke ngaphezulu kuyo, ngakumbi kunye neeprojekthi zentsebenziswano zangaphandle. EYurophu amanye amacebo ayasebenza, kodwa kweli cala lechibi kunokuba yimbewu enexabiso enokuhluma ngokudubulayo. Kumazwe amaninzi akuLatin America kukho iiprojekthi zentsebenziswano ezisebenza ngemali evela kwi-European Union okanye iingxowa-mali zamazwe amabini ezivela eJamani, Holland, Finland, Spain, ukukhankanya ezomeleleyo. Ngaphandle koko, kukho iiprojekthi zentsebenziswano ezilawulwa ngokuthe ngqo namabhunga, uluntu oluzimeleyo okanye amabhunga edolophu ziinkampani zaseYurophu, ii-NGO okanye oomasipala abanempumlo elungileyo. Kuninzi lwezi projekthi kukho izinto ezinqamlezileyo ezifana nokusingqongileyo, ilifa lemveli, ukuba sesichengeni, ukutshintsha kwemozulu, ukungafihli kwamasango, njl. ezibandakanya iimveliso ze-desktop kunye neemephu zewebhu.
Akunakuba kubi ukuba unokunxibelelana ngakumbi ngokubhekisele kuloo niche, kuba abaxhamli bayakwamkela isoftware ebonelelweyo kwaye bayakuyigcina ukuba bashiyeke neencwadana noqeqesho. Izixhobo zinokolulwa ngakumbi ukuba iindleko zamaphepha-mvume ziyacuthwa kwaye, ekuhambeni kwexesha, uzinzo lwabantu abaqeqeshiweyo luya kuba nefuthe ekusasazeni i-gvSIG, isenzo ekufuneka sithathiwe zizifundiswa kunye necandelo labucala elinikezela ngeenkonzo kucwangciso lokusetyenziswa komhlaba. Ukuba unganempembelelo kwimigaqo-nkqubo yokufudukela kwisoftware yasimahla ... ngcono kakhulu.
Kwakukho iqela elincomekayo elibizwa ngokuthi gvSIG kunye nentsebenziswano, mhlawumbi unganyanzelisa ukuba uphinde uyifumane. Tyala imali kwinkqubo yokusebenza amava kwaye ukuhanjiswa yenye yezona zinto zibalaseleyo umbutho ubonakala uzenza ngendlela elungileyo. Ilungile loo nto, kwaye kufuneka inyanzelise uzinzo oluvela kummangalelwa ngokuhlangeneyo kuba impendulo yomntu wesithathu iya kuqinisa inkqubela esele yenziwe.
Akufuneki ukuba, inkxaso yeefomathi ze-CAD zamva nje zibandakanyiwe, esi iya kuba sisixhobo esiza kugcinwa sisoftware. Kodwa kufanelekile ukuxhasa amakhwenkwe e GIS ephathekayo ukubandakanya le nguqulo kungekudala kuba basilele kunye no-1.1. Siza kujonga phambili kwinkomfa yalo nyaka, ngokuqinisekileyo siya kwazi iindaba ezininzi apho.
Ukusuka apha ungalanda i-gvSIG 1.10
AutoDesk Bentley Systems ESRI GvSIG OS umbono yam yokuqala QGIS
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ngaba iiPC ziya kufa ngenxa yabasebenzisi beCAD / GIS?
Post Next Amsterdam and moreOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-3 ziye "kujongwa kwi-gvSIG 1.10"
Ewe, sivela eCartoLab sisebenzisana nathi kwiprojekthi yamanzi ethi iNgeniería Sin Fronteras iNgeneron eHonduras. Sinewebhusayithi apho isicelo se-gvSIG Fonsagua sicaciswa ngcono apho sinethemba lokuqhubeka nokusebenza kwikamva.
Enkosi ngegalelo likaFrancisco, onomdla kukwazi ukuba wenze umsebenzi kumazantsi eHonduras. Makhe sibone ukuba ngenye imini savumelana na neqela kwaye sinecappuccino eTegucigalpa.
Kwaye, iphoso lenzeke kum xa ndisusa irekhodi ekhethiweyo.
Ndivumelana nohlalutyo lwakho, i-gvSIG yinkqubo eqhubela phambili kwizinga elifanelekileyo kunye noluntu ekubhekwa ngalo njengenye yemilenze yokuzinza kwiprojekthi.
Enyanisweni, uLuhlu lokuHlola luyongezwa ukusuka kuluntu, luphuhliswe ngabalingane baseCartoLab.
Le Imposiso ukuba uyakholwa ezinxulumene ukucima xa une ukhetho okanye into ekhethiweyo. Sikholelwa ukuba iinguqulelo uphuhliso ukwandiswa iyatyhilwa phofu ukuba ulinge ungathumela sibe inkcazo yebug kwaye gvSIG ifayile yelog ngokusebenzisa bugtracker of osor, uluhlu lokuposa, okanye imeyile yam.